लिपुलेकको चोटमा सांसदको ठट्टा
संसद मुलुकका लागि आवश्यक नीति, ऐन, कानुन बनाउने थलो हो । मुलुकको विकासका लागि आवश्यक योजना र कार्यक्रम बनाउने थलो हो संसद । संसद जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि, जनताले विश्वास गरेर पठाएका विधायकहरू रहने थलो हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद एक प्रकारले राज्य संयन्त्रको सर्वोच्च निकाय हो । शक्ति पृथकीकरणको मान्यताअनुसार जाँच र सन्तुलनको अवधारणाअनुकूल संसद, सरकार र अदालतका विशिष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिएका हुन्छन् तथापि संसद नै यस्तो निकाय हो, जसले मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकार निर्माण गर्ने काम गर्छ भने सरकारले कमजोरी गरेमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने तथा सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार नै गिराउनेसम्मको भूमिका खेल्न सक्छ ।
यति मात्र होइन, संसदले नै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई नियुक्तिका निम्ति सिफारिस र महाअभियोग प्रस्तावमार्फत् हटाउन पनि सक्छ ।
यति अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण संसद ठट्टा मजाक गर्ने थलो होइन । त्यसमाथि अतिसंवेदनशील अवस्थामा, मुलुकको सङ्कट र विपत्तिको समयमा बसेको संसद बैठक विषयबाहिरका, कम महत्त्वका, हँसिमजाकका, ठट्यौली कुराहरू गर्ने थलो बन्नुहुँदैन ।
अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ । विश्वका धेरै देशमा जनजीवन आतसपूर्ण, त्रासद र भयपूर्ण बनिरहेको छ । आर्थिक, व्यापारिक, उत्पादनका क्षेत्र तहसनहस बन्ने अवस्था आएको छ । यसबीच नेपाल पनि डेढ महिनादेखि लकडाउनमा छ । भाइरसको संक्रमण दर रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक जीवन अस्तव्यस्त छ । नेपाली भूमिमा भारतीय डाेजर चलेकाे छ ।
यसैबीच संसदको वर्षे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । निवर्तमान सभामुखको यौन दुर्व्यवहार आरोपका कारण लामो समय सभामुखविहीन बनेको संसदले गत अधिवेशनमा नयाँ सभामुख पाएपछि पनि धेरै कामहरू गर्न सकेन । कतिपय अतिआवश्यक ऐन, कानुन निर्माण र संशोधनका काम बाँकी नै रहेका होलान् । ती सबै थाँती रहेका कामहरू सम्पन्न गर्दै अब तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनमा आवश्यकताअनुसारको संशोधन पनि बाँकी नै होला ।
यसका अतिरिक्त अन्य नियमित कामकारबाहीका चाङ पक्कै छन् संसदमा, जुन तत्काल गरिहाल्नुपर्छ । त्यतातिर संसदको, संसद सदस्य अर्थात् सांसदहरूको ध्यान गएको देखिएको छैन । कोरोना कहरबाट मुक्तिका लागि बनाइनुपर्ने नीति र योजनाबारे चासो र छलफल देखिँदैन ।
विभिन्न समितिहरू छन् संसदमा, ती समितिहरूले सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी काम गर्न सकेका पनि पाइँदैन । समितिका सदस्यहरूको काम बेलाबेला भेला भएर बैठक भत्ता पचाउने वा समय कटाउने वा एकअर्कालाई हिलो छ्यापेर रमाउने मात्र होइन ।
पछिल्लो समय भारतले चीनको मानसरोवार जाने बाटो नेपाली भूमि प्रयोग गरेर निर्माण गर्नुका साथै कोरोना महामारीका बीच उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारतप्रतिको आक्रोश बढेको छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय अहिले निकै चर्किएको छ । उक्त विषयमा कूटनीतिक समाधानको पहल सुरु हुन सकेको छैन । जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै उक्त विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको जवाफहरू आइरहेका छन् । योभन्दा लाजमर्नु विषय के हुन सक्छ ? आफ्नो मुलुकको माटो मिचिँदा जानकारीसम्म नपाउने मन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिकता के ?
अर्कातर्फ पटक पटक बल्झिरहने विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अघिल्ला वा वर्तमान कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी पहल गरेका पाइँदैन ।
पूर्वमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापाले भनेझैँ हाम्रा नेता (प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रायः) यता देशभित्र ठूलो स्वरमा भारतको चर्को विरोध गरेर भारतका नेतृत्व सामु ‘हजुर, हामीलाई देशभित्र विरोध गर्नचाहिँ दिनुहोस्, नभए हाम्रो जागिर जान्छ, जनताले हामीलाई मार्छन्’ भन्ने शैलीमा नेपाली नेतृत्व पटक पटक प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । यसको प्रमाण विगतमा र हिजो मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै जिम्मेवार व्यक्तिको हस्ताक्षर नआउनु पनि हो ।
यसले नेपाली नेता मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र र कूटनीतिक क्षेत्रसमेत भारतसँग छुलछुल बनेको प्रस्ट हुन्छ । अझ लाजमर्नु त के भने विगतमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका, सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू समेत अहिले सीमा मिचिएको विरोधमा आगो ओकलिरहेका छन् । तर, यो समस्या आज मात्र उब्जिएको नभएर उनीहरू विगतमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनिरहँदा पनि ज्यूँका त्यूँ नै थियो । उसबेला उक्त समस्या समाधानका लागि माखो नमार्ने यस्ता व्यक्तिहरू आज बुरुकबुरुक विरोधमा उफ्रिनुको कुनै तुक छैन ।
सन्दर्भ संसदको गरिमा, काम, कर्तव्य र भूमिकाका बारेमा थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा, लोकतन्त्रमा संसद उच्च निकाय हो, जुन माथि पनि उल्लेख गरियो । संसदकै वरिपरि सरकार, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, न्यायपालिका आदि सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् । मुलुकको दिशा र मार्ग संसदले बनाएका नीति, नियम, ऐन, कानुनले निर्धारण गरेका हुन्छन् । संसदलाई यतिसम्म अधिकार हुन्छ कि संविधान संशोधन गर्न पनि सांसदको दुई तिहाइ पर्याप्त हुन सक्छ ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय संसदलाई सामान्य अवस्थामा त ठट्टा मजाकको थलो बनाउनु लज्जास्पद हो भने अहिलेको जस्तो गम्भीर सङ्कटका बेला रत्यौली खेल्ने थलो बनाइनु संसदीय गरिमामाथिको धज्जी हो । यसबेला संसद कवि, साहित्यकार उत्पादन गर्ने, कविता, कथा सुनाउने र समय बर्बाद गर्ने थलो होइन ।
केही दिनअघि कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले लिपुलेकका विषयमा कवितामार्फत् व्यं‌ग्य कसे संसदमा । यसअघि पनि संसदमा यही शैलीले व्यंग्य गर्ने चलन बनेकै हो तथापि अहिलेको सन्दर्भ व्यंग्य र ठट्टा मजाकमा संसदको समय बर्बाद गर्ने समय होइन बरु असल योजना ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न संसद र सरकारलाई झकझक्याउने बेला हाे, सल्लाह, सु्झाव दिने र सहयोग गर्ने बेला हो । यसबेला त गम्भीर र अतिआवश्यक विषयमा व्यापक र सूक्ष्म ढंगले समीक्षा गर्ने, निर्णय गर्ने बेला हो ।
वर्षे अधिवेशन भनेपछि विशेषतः बजेट अधिवेशन भनेर पनि बुझिन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अबको १५ दिनमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयारी सम्पन्न गरी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यहीबीच कोरोनाका कारण निम्तिएको सङ्कट र उक्त सङ्कटबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि, शैक्षिक तथा अन्य उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा कसरी सहजता ल्याउने ? कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा जनजीवन सामान्य बन्छ र मुलुकको आर्थिक सङ्कटमा केही टेवा पुग्न सक्छ भन्नेतिर जनताका प्रतिनिधिहरू अर्थात् सांसदहरू योजना बनाउन छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ?
भएको उल्टो छ- संसद आज पनि ख्यालठट्टा र मजाकको थलो बनेको छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई पखाल्ने, उचाल्ने र पछार्ने, खुइल्याउने र तताउने थलोका रूपमा संसद बनिरहेको छ । यो दुर्भाग्य हो ।
अझ वर्तमान संसदलाई धेरै काम गर्न सहज छ, पूर्ण बहुमत जो छ । यस्तो बेलामा समेत कहिले सत्तारुढ दलबीचकै आन्तरिक खिचातानी त कहिले सरकारलाई सत्तारुढ दलबाटै सङ्कट दिइनुका कारण सत्तारुढ संसदहरू नै विभाजित बनेको अवस्था छ । यसको एउटा उदाहरण एमसीसी प्रकरण पनि हो । एक पक्ष एमसीसी यथावस्थामा पास गरिनुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष पर्याप्त संशोधन नभई यो पास गरिनुहुन्न भन्ने अडानमा ।
यस्ता अन्य धेरै विषय र सन्दर्भ छन्, जसमा सत्तारुढ सांसदहरूबीच नै ऐक्यबद्धता छैन । एक प्रकारले निम्छरो, दयापेक्षी, लुलो र विचरो प्रतिपक्षको पूर्ति पनि अहिले सत्तारुढ सांसदले नै गरिरहेका छन्- पक्ष-पक्षमा विभाजित बनेर सरकारको विरोध र खबरदारी गरेर ।
यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य नभएर कुरूप पक्ष हो । सत्तारुढले प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिदिनुपर्ने अनि प्रतिपक्षचाहिँ सत्तारुढका विद्रोहीहरूका पछिपछि ‘मूर्दावाद, मूर्दावाद’ भन्दै मलीन स्वरमा लज्जास्पद उपस्थिति देखाउनुपर्ने अवस्था कठै ! भन्नु खालकै छ ।
अन्त्यमा, संसद ख्यालठट्टा गर्ने, मजाक गर्ने र रत्यौली खेल्ने थलो होइन, यो जिम्मेवार र उच्च निकायको मान, मर्यादा, गरिमा र महत्त्वमा ठेस नपुर्‍याऊ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७, १९:०५:००